50 Common Grammar Mistakes in English (5) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 9:45 PM | No မှတ်ချက် |
တတ်၍ ရေးခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ ၊ ငတ်၍ရေးခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ ၊ ၀ါသနာပါ၍ ရေးခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ ။ သိသမျှထဲကနေ မျှဝေလိုသောစိတ်ဖြင့်သာ ရေးပါသည် ။ ဗဟုသုတများကိုသာမက စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုများ မေတ္တာတရာများ ခင်မင်မှုများကိုပါ ပေးလိုခဲ့ပါသည် ။ သို့သော် နားလည်အောင် မဖေါ်ပြနိုင်ခဲ့သော် ခင်မင်စိတ်ရှည်စွာဖြင့် ဆက်လက်အားပေးကြပါလို့ ...
Wrong : My brother has 30 years.
Right : My brother is 30 (years old).
ကျနော့်အကိုက အသက် ၃၀ ပါ ။
အသက်ကို ပြောတဲ့အခါ အသုံးများတဲ့ ပြောနည်း (၃) မျိုးရှိပါတယ်
My brother is 30.
My brother is 30 years old.
My brother is 30 years of age. စသည်ဖြင့်
ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီး ပြောတဲ့ အခြားနည်းလေးတွေလည်း တစ်ခါတရံမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ် ။
Wrong : I want eat now.
Right : I want to eat now.
အခု ကျနော် အစာစားချင်တယ်
Want = ရချင်သည် လိုချင်သည် (want + noun)
I wantacar. ကျနော် ကားတစ်စီး/လိုချင်တယ်
Want to = ချင်သည် ( want to + V1)
Want = သင့်သည် ၊ အပ်သည် (want to be + adj)
(I နဲ့ we အတွက်တော့ ဒီအဓိပ္ပါယ်မယူရပါ)
(ကျနော်က ထူးဆန်းပြီး ဘာသာပြန်ပြတာ မဟုတ်ပါ ၊ အဘိဓါန်တွင် ပါသော အဓိပ္ပါယ်သာ ဖြစ်ပါတယ်
Wrong : You are very nice, as your mother.
Right : You are very nice, like your mother.
ခင်ဗျားက ခင်ဗျားအမေလိုပဲ သိပ်သဘောကောင်းတယ်နော်
ဒီမှာ as your mother က ခင်ဗျားအမေအဖြစ်နဲ့ ..လို့ ယူရမှာ ဖြစ်ပြီး
, like your mother က ခင်ဗျားအမေလိုပဲ ..လို့ ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်
အခု ဒီမှာ As နဲ့ like နှစ်ခုလုံးက preposition (၀ိဘတ် ၊ ဆက်စပ်မှုပြစကားလုံး) အဖြစ် သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ as ကို conjunction (စကားဆက်) အဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ပါသေးတယ် ။
conjunction အဖြစ်သုံးတဲ့အခါမှာတော့ as + S + V ပုံစံ သုံးရပါတယ်
Wrong : She said me that she liked you.
Right : She told me that she liked you.
သူမက ကျနော့်ကို သဘောကျတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်
Say ကိုသုံးတဲ့အခါ object မလိုပါ ၊ tell ကိုသုံးလျှင် object ထည့်ပါ ။
Wrong : My husband engineer.
Right : My husband is an engineer.
ကျမအမျိုးသားက အင်္ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ပါ
ဘယ်သူက ဘာဖြစ်တယ် လို့ ရေးချင်လျှင် ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်မယ် (နည်းကြိုက်လျှင်ယူပါ - ရှင်းလင်းတင်ဆက်ပုံ တစ်မျိုးလေးပေါ့)
My husband = engineer
အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားက နာမ်တွေရှေ့မှာ တိကျစေချင်တဲ့အခါ article ထည့်ပေးရပါတယ်
( မြန်မာလိုမှာကျ.. ကျမယောက်ျားက အင်္ဂျင်နီယာပါ .. ဆိုပြီး “တစ်ယောက်” ဆိုတာ မပါလည်း နားလည်နိုင်ပါတယ်)
My husband ကရှေ့မှာ My ဆိုတဲ့ possessive case (possessive adjective) ဖြစ်ပြီး possessive determiner လည်း ဖြစ်ပါတယ် ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပြအညွှန်းစကားလုံးပါနေလို့ တိကျပြီးသားမို့ article ထည့်ဖို့မလိုဘူး ၊ noun တစ်ခုရှေ့မှာ determiner နှစ်လုံးထပ်ပြီး သုံးလေ့မရှိပါဘူး
Engineer က တစ်ယောက် ..နှစ်ယောက် စသည်ဖြင့် ရေတွက်လို့ရတဲ့အတွက် a, an , the တစ်ခုခု ထည့်ပေးရတော့မယ် ၊ အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတဲ့ အသံထွက်ရဲ့ အစစာလုံးက သရသံ(“အ”သံ)ဖြစ်နေပြီး တစ်ယောက်လို့ ဆိုချင်တာကြောင့် an ထည့်ပါမယ် ။ ဒါကြောင့်
My husband = an engineer ဖြစ်သွားပြီ ၊
ညီမျှခြင်းနေရာမှာ သင့်တော်ရာ V-be လေးထည့်ပြီး ၊ နောက်ဆုံးမှာ full-stop လေးထည့်လိုက်ပါ ။ ရပါပြီ ။
My husband is an engineer. လို့ ..
ပြီးသွားပြီဆိုမှ မှားနေတဲ့ sentence ကို ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တိကျမှုမရှိဘူး ၊ ညီမျှခြင်းပြ (noun နှစ်ခုကို ဆက်စပ်ပေးတဲ့) စာလုံး မပါဘူး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိသွားပါပြီ ။
အဲလိုပဲလေ ကျနော်တို့မှာ လိုအပ်နေတဲ့ အချက်လေးတွေကို ရှာဖွေပြီး .. သိပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပါ ၊ ဒါကြောင့် တည်ဆောက်ပုံမှန်ကန်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ဘ၀ရဲ့ ၀ါကျလှလှလေးတွေ ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ မေတ္တာပို့သလိုက်ပါကြောင်း .. sunglasses emoticon